Easy Japanese in Burmese - Lesson 33 | NHK WORLD RADIO JAPAN
NHK WORLD > လွယ်ကူလေ့လာဂျပန်စာ > မြန်မာဘာသာ Top > သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်များ > သင်ခန်းစာ 33
အန်းနာ - ကိုပေးမယ်
အန်းနာဟာ ဆာ့ခူရာရဲ့မောင်ဝမ်းကွဲ ခဲန်းတာ နဲ့အတူ တက္ကသိုလ်နယ်မြေထဲက ပွဲတော်ကိုလာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ တက္ကသိုလ် ဓါတ်ပုံအသင်းက ပြသတဲ့ ဓါတ်ပုံပြပွဲကိုကြည့်နေကြပါ တယ်။
သင်ခန်းစာ 33 ၁ဝ မိနစ်
သင်ခန်းစာကို download လုပ်ယူရန် 33
ANNA-SAN NI AGEMASU
これは、僕が富士山で撮った写真です。 ဒါက ကျွန်တော် ဖူဂျီတောင်မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပါ။
KORE WA, BOKU GA FUJISAN DE TOTTA SHASHIN DESU.
ဒါက ကျွန်တော် ဖူဂျီတောင်မှာ ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံပါ။
あっ、私だ。 အိုး ... ကျွန်မပဲ။
A', WATASHI DA.
အိုး ... ကျွန်မပဲ။
あとで、アンナさんにあげます。 အံ့သြသွားလား။ နောက်မှ အန်းနာကိုပေးမယ်။
ATODE, ANNA-SAN NI AGEMASU.
အံ့သြသွားလား။ နောက်မှ အန်းနာကိုပေးမယ်။
写真をくれるんですか。うれしいです。 ဓါတ်ပုံကိုပေးမှာလား။ ဝမ်းသာလိုက်တာ။
SHASHIN O KURERU N DESU KA? URESHII DESU.
AGEMASU နဲ့ KUREMASU
ဂျပန်စကားမှာ ပေးတဲ့သူရဲ့နေရာကပြောနေတာလား။ လက်ခံတဲ့သူရဲ့နေရာကပြောနေတာလားဆိုတာ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကြိယာတွေကို ခွဲသုံးပါတယ်။ ပြောတဲ့သူကနားထောင်တဲ့သူကိုတစ်ခုခု ပေးတဲ့အခါမှာ ပြောတဲ့သူက ပေးတဲ့သူရဲ့ ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ AGEMASU လို့ပြောပါတယ်။ KUREMASU ဆိုတာက လူတစ်ယောက်က အခြားလူတစ်ယောက်ကို တစ်ခုခု ပေးတဲ့အခါမှာလည်း သုံးပါတယ်။ သင်​​ပေးပါ ဆရာမကဏ္ဍကို စမယ်နော်။
AGEMASU နဲ့ KUREMASU တို့ရဲ့ခြားနားချက်
ဂျပန်စကားမှာ ပေးတဲ့သူရဲ့နေရာကပြောနေ တာလား။ လက်ခံတဲ့သူရဲ့နေရာကပြောနေတာလားဆိုတာ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ ကြိယာတွေကို ခွဲသုံးတာပါ။ခဲန်းတာ့လိုမျိုး ပြောတဲ့သူက နားထောင်တဲ့သူကိုတစ်ခုခုပေးတဲ့အခါမှာ ပြောတဲ့သူက ပေးတဲ့သူရဲ့ ရှုထောင့်ကနေပြီးတော့ AGEMASU လို့ပြောပါတယ်။ AGEMASU ဆိုတာကို လူတစ်ယောက်က အခြားလူတစ်ယောက်ကို တစ်ခုခု ပေးတဲ့အခါမှာလည်း သုံးပါတယ်။
ကျောင်းပွဲတော်မှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေရဲ့ အစားအသောက်ရောင်းတဲ့ တွန်းလှည်းဆိုင်ခန်းလေးတွေ အများကြီးပါပဲ။ ကျွန်မခေါက်ဆွဲကြော်စားကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ ဆောင်းဦးရာသီမှာ အနုပညာ၊အားကစားလုပ်ချင်စိတ်နဲ့ စားချင်သောက်ချင်စိတ်ကို နှိုးဆွပေးတဲ့ရာသီဆိုပြီး ပွဲတွေအများကြီးလုပ်ကြပါတယ်။ အရမ်းကောင်းတဲ့ရာသီပါ။
သင်ခန်းစာ 32 ဖူတွန်အိပ်ယာ ကို ပိုကြိုက်တယ်။